ဘဝအခြေအနေကြောင့် ဟောလီးဝုဒ်နာမည်ကြီးတွေအရင်က လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အလုပ်များ
ဘဝအခြေအနေကြောင့် ဟောလီးဝုဒ်နာမည်ကြီးတွေအရင်က လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့အလုပ်များ
3 Jul 2018 . 4:03 PM
ဘဝအခြေအနေကြောင့် ဟောလီးဝုဒ်နာမည်ကြီးတွေအရင်က လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အလုပ်များ
ကမ္ဘာကျော်ဟောလီးဝုဒ် အနုပညာရှင်တွေ နာမည်မကြီးခင်ကသူတို့ဘယ်လိုအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ရသလဲဆိုတာကို သိချင်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ သူတို့တွေလည်း လူထဲကလူတွေပါပဲ ဒါကြောင့်သူတို့ဘဝတစ်ခု ကိုဖြတ်သန်းကြဖို့အတွက် အလုပ်တွေလည်းအစုံလုပ်ခဲ့ရတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ ပရိသတ်ကချစ်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်မဖြစ်ခင်မှာ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဘဝကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကြောင့် အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ရတဲ့သူတွေ ရှိသလို သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ အတက်ပညာတွေနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေကတော့ …….
Steve Buscemi ဟာဟောလီးဝုဒ်အနုပညာရှင် တစ်ယောက်မဖြစ်ခင်က မီးသတ်သမားအလုပ်ကိုလုပ်ဖူးတယ် လို့သိရပါတယ်။ နယူးယောက်မြို့မှာ 9/11 ဖြစ်စဉ် တုန်းက ပြိုကျခဲ့တဲ့ အဆောက်အဦးတွေအောက်မှ လူတွေကိုကယ်ဆယ်တဲ့ နေရာမှာလည်း ပါဝင်ကူညီခဲ့ဖူးပါတယ်။
Christopher Walken ကတော့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်မဖြစ်ခင်မှာ ခြင်္သေ့တွေကိုထိန်းတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူအသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်လောက်က Sheba ဆိုတဲ့ ခြင်္သေ့ကြီးနဲ့ ဆပ်ကပ် ပြခဲ့ဖူးတယ်လို့သိရပါတယ်။
မင်းသားကြီး Harrison Ford ကတော့ လက်သမား အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ဖူးတာဖြစ်ပါတယ်။
Jonny Deep ကတော့အနုပညာအလုပ်တွေ ကိုမလုပ်ခင်က ဖုန်းနဲ့မားကတ်တင်း လုပ်တဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ဖူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ပြီးတော့လည်းသူအဲ့အလုပ်ကိုမနှစ်သက်ပါဘူး လို့လည်းသိရပါတယ်။
Pierce Brosnan ကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေမလုပ်ခင် တကယ်ကိုကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တစ်ခုကတော့ မီးနဲ့စတန့်လုပ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လောက်မှာ အခုလိုစတန့်ပြတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
Jim Carrey ဟာငယ်စဉ်က သူ့မိသားစု အဆင်မပြေတဲ့ အတွက်ကျောင်းတောင်ဆက်မတတ်နိုင်ဘဲ ထွက်လိုက်ပြီးတော့ မိဘကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေတောင်ပြန်ထောက်ပံ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုထောက်ပံ့နိုင်ရန် အတွက် ကျောင်း ၊ အလုပ်ရုံ စတဲ့နေရာတွေမှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။
Brad Pitt ကတော့ နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တစ်ယောက်မဖြစ်ခင်မှာ ဟောလီးဝုဒ်က စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ကြက်အရုပ်ဝတ်စုံကြီးကို ဝတ်ပြီးတော့ လာစားတဲ့ဧည့်သည်တွေကို နှုတ်ဆက်ရတဲ့ သူတစ်ဦးအဖြစ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
Hugh Jackman ကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေမလုပ်ခင်အရင်က Gym နည်းပြလုပ်ဖူးတာဖြစ်ပါတယ်။
Wonder Woman ဇာတ်ကားနဲ့ နာမည်ကြီးခဲ့သူ Gal Gadot ကတော့ အစ္စရေးစစ်တပ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
Chris Pratt ကတော့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ နာမည်မကြီးခင်က ဟာဝိုင်အီမှာနေထိုင်ရင်း နဲ့ သူ့ဘဝရပ်တည်ဖို့အတွက် ကလပ်မှာ ကပြတဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရဖူးတယ်လို့သိရပါတယ်။
George Clooney ကတော့ အလုပ်တွေတော်တော်များများကို လုပ်ဆောင်ဖူးတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးဝတ်ဖိနပ်တွေကိုရောင်းခဲ့ဖူးသလို အိမ်အရောက်ဝင်ဆောင်မှုပေးတဲ့ အာမခံလုပ်ငန်းတွေ အပြင် ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမား ၊ ဆေးရွက်ကြီးညှပ်တဲ့ သူတစ်ယောက်အဖြစ်လည်း လုပ်ခဲ့ဖူးတာဖြစ်ပါတယ်။
ဘဝအခွအေနကွေောငျ့ ဟောလီးဝုဒျနာမညျကွီးတှအေရငျက လုပျခဲ့ဖူးတဲ့ အလုပျမြား
ကမ်ဘာကြျောဟောလီးဝုဒျ အနုပညာရှငျတှေ နာမညျမကွီးခငျကသူတို့ဘယျလိုအလုပျတှလေုပျခဲ့ရသလဲဆိုတာကို သိခငျြကွမယျလို့ထငျပါတယျ။ သူတို့တှလေညျး လူထဲကလူတှပေါပဲ ဒါကွောငျ့သူတို့ဘဝတဈခု ကိုဖွတျသနျးကွဖို့အတှကျ အလုပျတှလေညျးအစုံလုပျခဲ့ရတဲ့သူတှရှေိပါတယျ။ ပရိသတျကခဈြတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျမဖွဈခငျမှာ ကွမျးတမျးတဲ့ ဘဝကိုရငျဆိုငျခဲ့ရတာကွောငျ့ အလုပျတှလေုပျခဲ့ရတဲ့သူတှေ ရှိသလို သူတို့ရဲ့ကိုယျပိုငျကြှမျးကငျြတဲ့ အတကျပညာတှနေဲ့ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးလုပျခဲ့ဖူးတဲ့ နာမညျကွီးအနုပညာရှငျတှကေတော့ …….
Steve Buscemi ဟာဟောလီးဝုဒျအနုပညာရှငျ တဈယောကျမဖွဈခငျက မီးသတျသမားအလုပျကိုလုပျဖူးတယျ လို့သိရပါတယျ။ နယူးယောကျမွို့မှာ 9/11 ဖွဈစဉျ တုနျးက ပွိုကခြဲ့တဲ့ အဆောကျအဦးတှအေောကျမှ လူတှကေိုကယျဆယျတဲ့ နရောမှာလညျး ပါဝငျကူညီခဲ့ဖူးပါတယျ။
Christopher Walken ကတော့အနုပညာရှငျတဈယောကျမဖွဈခငျမှာ ခွင်ျသတှေ့ကေိုထိနျးတဲ့ သူတဈယောကျဖွဈခဲ့ဖူးပါတယျ။ သူအသကျ ၁၆ နှဈအရှယျလောကျက Sheba ဆိုတဲ့ ခွင်ျသကွေီ့းနဲ့ ဆပျကပျ ပွခဲ့ဖူးတယျလို့သိရပါတယျ။
မငျးသားကွီး Harrison Ford ကတော့ လကျသမား အလုပျကိုလုပျခဲ့ဖူးတာဖွဈပါတယျ။
Jonny Deep ကတော့အနုပညာအလုပျတှေ ကိုမလုပျခငျက ဖုနျးနဲ့မားကတျတငျး လုပျတဲ့ အလုပျကိုလုပျဖူးခဲ့တာဖွဈပါတယျ ပွီးတော့လညျးသူအဲ့အလုပျကိုမနှဈသကျပါဘူး လို့လညျးသိရပါတယျ။
Pierce Brosnan ကတော့ အနုပညာအလုပျတှမေလုပျခငျ တကယျကိုကြှမျးကငျြစှာလုပျခဲ့တဲ့ အလုပျတဈခုကတော့ မီးနဲ့စတနျ့လုပျတဲ့သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ သူဆယျကြျောသကျအရှယျလောကျမှာ အခုလိုစတနျ့ပွတဲ့ အလုပျကိုလုပျနပွေီဖွဈပါတယျ။
Jim Carrey ဟာငယျစဉျက သူ့မိသားစု အဆငျမပွတေဲ့ အတှကျကြောငျးတောငျဆကျမတတျနိုငျဘဲ ထှကျလိုကျပွီးတော့ မိဘကိုတဈဖကျတဈလမျးကနတေောငျပွနျထောကျပံ့ခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။အခုလိုထောကျပံ့နိုငျရနျ အတှကျ ကြောငျး ၊ အလုပျရုံ စတဲ့နရောတှမှော သနျ့ရှငျးရေးလုပျတဲ့ အလုပျကိုလုပျခဲ့ရသူဖွဈပါတယျ။
Brad Pitt ကတော့ နာမညျကွီးအနုပညာရှငျတဈယောကျမဖွဈခငျမှာ ဟောလီးဝုဒျက စားသောကျဆိုငျတဈဆိုငျမှာ ကွကျအရုပျဝတျစုံကွီးကို ဝတျပွီးတော့ လာစားတဲ့ဧညျ့သညျတှကေို နှုတျဆကျရတဲ့ သူတဈဦးအဖွဈလုပျဆောငျခဲ့ဖူးပါတယျ။
Hugh Jackman ကတော့ အနုပညာအလုပျတှမေလုပျခငျအရငျက Gym နညျးပွလုပျဖူးတာဖွဈပါတယျ။
Wonder Woman ဇာတျကားနဲ့ နာမညျကွီးခဲ့သူ Gal Gadot ကတော့ အစ်စရေးစဈတပျမှာ တာဝနျထမျးဆောငျဖူးသူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။
Chris Pratt ကတော့ အနုပညာရှငျတဈယောကျအနနေဲ့ နာမညျမကွီးခငျက ဟာဝိုငျအီမှာနထေိုငျရငျး နဲ့ သူ့ဘဝရပျတညျဖို့အတှကျ ကလပျမှာ ကပွတဲ့သူတဈယောကျအနနေဲ့ ဖွတျသနျးခဲ့ရဖူးတယျလို့သိရပါတယျ။
George Clooney ကတော့ အလုပျတှတေျောတျောမြားမြားကို လုပျဆောငျဖူးတဲ့သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ အမြိုးသမီးဝတျဖိနပျတှကေိုရောငျးခဲ့ဖူးသလို အိမျအရောကျဝငျဆောငျမှုပေးတဲ့ အာမခံလုပျငနျးတှေ အပွငျ ဆောကျလုပျရေးအလုပျသမား ၊ ဆေးရှကျကွီးညှပျတဲ့ သူတဈယောကျအဖွဈလညျး လုပျခဲ့ဖူးတာဖွဈပါတယျ။